संविधान संशोधन:चुनावी तुरुप
रिपोर्टसोमवार, मंसिर १३, २०७३
संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न ९ मंसीरमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता । तस्वीरः प्रम सचिवालय
सामान्यतः प्रत्येक बिहीबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठक संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा पारित गर्न भन्दै शुक्रबार (१० मंसीर) का लागि सारियो । तर संशोधनको विषयमा नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ‘हरियो झ्ण्डा’ नदेखाएपछि बैठक बस्न सकेन ।
१० मंसीर बिहानै बसेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित बैठकले संशोधन विधेयकका विषयमा कम्तीमा दुई दिन थप छलफल गर्ने निर्णय गर्यो । बैठकमा सहभागी एक माओवादी नेता एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नभई कांग्रेस र माओवादीभित्रै देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न, मोर्चालाई विश्वासमा लिन र भर्खरै एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका साना दलसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नका लागि समय थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, ९ मंसीरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि नै प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनका लागि तत्काल एमालेलाई मनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए ।
गएको १९ साउनमा मोर्चामा आवद्ध दलहरूसँग तीनबुँदे सहमति गरेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहमत नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल संसद्मा संशोधन विधेयक नलैजाने हो भने सरकार गठनको औचित्य नै समाप्त हुने तर्क गर्छन् । असन्तुष्टिलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि मात्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “बहुमत जनसंख्या बस्दै आएको क्षेत्र आन्दोलित नहोस् भन्नका लागि संशोधन अनिवार्य छ ।” विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन बाँकी रहे पनि सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषिक प्रावधान सम्बन्धी धारा संशोधन गरेर तराई मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने तय भएको पनि उनको भनाइ छ । “त्यसपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने र संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुने देखिन्छ”, पोखरेल भन्छन् ।
एमालेले भने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभई संविधान संशोधन गर्न नहुने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ । एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनले समस्या बल्झउने बताउँछन् । “जनताले चित्त बुझइसकेको सात प्रदेश चलाउँदा समस्या सल्टिंदैन, बल्झ्न्छि’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “यस्तो कदमले देशमा स्थायित्व आउन थाल्यो भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई बल पु¥याएको जस्तो देखिन्छ ।” आफूहरू मधेश र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि समाप्त हुन्छ भनेरै संविधानको पहिलो संशोधनका लागि तयार भएको तर संशोधनपछि पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ देखिएको उनी बताउँछन् । “यसपटकको संविधान संशोधन पनि मोर्चाले मान्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?” नेम्वाङको प्रश्न छ । (हे. बक्स)
हुन पनि एमालेको समर्थन खोजेको सत्ता गठबन्धनले मोर्चाकै समर्थन पाउन सकेको छैन । मोर्चाका नेताहरू कांग्रेस र माओवादीबीच नै कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा सहमति भइनसकेको बताउँछन् । सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारको संशोधन मस्यौदा हेरेर मात्र मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । संशोधनले आफूहरूले सरकारलाई बुझएको ११ बुँदे माग सम्बोधन गरे मात्रै मोर्चा सहमत हुने उनको भनाइ छ ।
सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानको महŒवपूर्ण विशेषता हो, लचकता । संविधानले मुलुकको सार्वभौमिकता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेकका सबै विषय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लचक संविधानलाई आवश्यक परे ताजा जनादेश लिएर संशोधन गर्न सकिने संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कठोर शक्ति सन्तुलन र लामो रस्साकस्सीबाट आएको संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नपुर्याई संशोधन गर्नु उचित होइन ।”
संविधान जारी गर्दा एकठाउँमा उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी संशोधनमा भने फरक कित्तामा पुग्नुका पछि चुनाव जित्ने रणनीति नै प्रमुख रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । यसअघिको निर्वाचनमा मधेशबाट ५२ सीट जितेको कांग्रेस संशोधनको जस लिएर मतदाता रिझउन चाहन्छ । त्यसैले पनि कांग्रेस एमालेलाई सकेसम्म सरकार बाहिर राखेरै निर्वाचनमा जाने योजनामा देखिन्छ । “माओवादीबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
संविधान निर्माणदेखि ओली नेतृत्वको सरकारका अडानहरूका कारण निर्वाचन आफू अनुकूल हुने एमालेको ठहर छ । कतिपयको भनाइमा निर्वाचनका लागि एमालेलाई नै सबैभन्दा बढी हतार छ । तर यसका लागि वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने र पहाडी मतदाता रिझउने रणनीति एमालेको छ । एमालेका एक नेता संविधान संशोधनको विरोध पनि एमालेको निर्वाचनको तयारी नै भएको तर्क गर्छन् ।
माओवादी पनि आफ्नो नेतृत्वमै संविधान संशोधन भएको जस लिन चाहन्छ । तर, सीमांकनका विषयमा पार्टीभित्रै सहमति बनाउन माओवादीलाई पनि सजिलो छैन । “पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनै कम्तीमा एक महीना लाग्ने देखिन्छ”, माओवादीका एक नेता भन्छन् ।
त्यसो त मधेशी मोर्चाका लागि पनि संविधान संशोधन देखाउने माग मात्रै हो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संशोधन भए पनि निर्वाचनसम्म आफूहरू ‘आन्दोलनकारी देखिरहनुपर्ने बाध्यता’ रहेको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी पनि संशोधनमा एमालेको विरोधको विशेष अर्थ देख्दैनन् । नौ बुँदे सहमतिमा एमाले र कांग्रेसले तयार पारेको खाका अनुसार नै सीमा संशोधन हुन लागेको उनको बुझइ छ । “संशोधनमा एमाले लचक हुने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन सहज बन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “संशोधन प्रस्ताव फेल हुनु भनेको एक हिसाबले संविधान नै फेल हुनु हो ।”
‘संशोधन राष्ट्रघात हो’
संविधान संशोधनमा एमाले तयार नहुनुको कारण के हो ?
संविधान संशोधन रहरको कुरा होइन । सत्ता गठबन्धनले अहिले पनि संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । मधेश र जनजातिका माग पूरा हुन्छन् भनी संविधानको पहिलो संशोधनमा हामी तयार भएका थियौं । तर, असन्तुष्टि त ज्यूँकात्यूँ देखियो । यो संशोधनले पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने के छ र ?
संविधान सर्वस्वीकार्य हुने, निर्वाचनको बाटो सहज बन्ने हो भने संशोधन किन नगर्ने ?
संसारमा कतै पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा संविधान बनेको छैन । हाम्रो संविधान ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको हो । तराई मधेशबाट एमालेले ४२ सीट जितेको छ । जसका लागि संशोधन गर्ने भनिएको छ, उहाँहरूको जम्मा ११ सीट छ । अब भन्नुस्, के गर्दा सर्वस्वीकार्यता हुन्छ ? अहिले गर्ने भनिएको संविधान संशोधन राष्ट्रघात हो ।
५ नम्बर प्रदेशबाट पाँच जिल्ला हटाउने र १ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्लाको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने प्रस्तावमा पनि एमालेको आपत्ति हो ?
५ र १ नम्बर प्रदेशका जनताले हाम्रो प्रदेशका फलानो जिल्ला हटाउनु पर्यो भनेको मैले सुनेको छैन । त्यहाँका जनता त प्रदेश टुक्र्याउनै पाइँदैन भनिरहेका छन् । बाहिरकाले फलानो प्रदेश टुक्र्याउनु पर्यो भन्न मिल्छ ?
संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव छ त ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानमा कुनै शर्त राखिएको छैन । एमाले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा पनि छैन । तर संशोधनमा कम्तीमा संविधान जारी गर्दाका दलहरू एक ढिक्का हुनुपर्दछ । संवादका लागि सत्ता गठबन्धनले पहल गर्नुपर्छ ।
‘संशोधनले निर्वाचनको वातावरण बन्छ’
सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै हो ?
असन्तुष्ट पक्षको माग संशोधनद्वारा सम्बोधन गरिने भनिएपछि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चारबुँदे नन–पेपरमा भएको सीमांकन सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्छु भन्नुभएकै थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले जुन असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पटक पटक वार्ता गर्यो, त्यसैका लागि संशोधन आवश्यक भएको हो । संविधान जारी गर्दा भएका कमी–कमजोरी सच्याउँदा कसैको केही बिग्रिंदैन ।
यतिबेला सरकारको प्राथमिकता त २०७४ माघको पहिलो साताभित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हुनुपर्ने होइन र ?
संविधान बन्ने क्रममा धेरै संघर्ष भयो, धेरैले बलिदानी दिए । बहुमत जनसंख्या बसोबास गरेको क्षेत्रमा असन्तुष्टि कायम रहेसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनकै लागि संशोधन आवश्यक भएको हो । संशोधनले संविधानको स्वीकार्यता बढाउँछ ।
संशोधन प्रस्तावमा मोर्चालाई मनाउन सक्नुुहुन्छ ?
हामी मूलतः संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा हटाउने पक्षमा छौं । सीमांकन बाहेकका विषयमा खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन । मोर्चालाई मनाउने गरी संशोधन गर्ने तयारीमा छौं ।
मोर्चालाई समेट्न एमालेलाई पाखा लगाउन खोेजेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रमुख दलहरू नमिली समस्या समाधान हुँदैन । एमाले विना दुईतिहाइ पुगे पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।